विदेशिनेहरूको देशप्रतिको माया - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
विकासको मियोलाई अब यसरी दर्बिलो बनाउनुपर्‍यो, जसले देशलाई समृद्धिको उचाइतर्फ निरन्तर अग्रसर गराओस् ।
पुस २८, २०७३-विदेशमा गएर कामको अवसर पाएकाहरू सुखी र भाग्यमानी हुन्छन् भन्ने आंँकलन त्यसरी जान खोजेर नपाएकाहरूमा हुन्छ होला । तर विदेशी भूमिमा उनीहरूले सँगालेको पीडालाई महसुस गर्ने हो भने विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारका लागि प्रक्रिया चालेर पनि जो—जो असफल भए, ती युवाले चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्ने हुन्छ । विदेशिएका युवासंँग आफू पुगेको देश र अवस्थापिच्छे फरक—फरक अनुभूतिहरू भेटिन्छन् । अति नै जोखिमपूर्ण कामका कारण आफ्नो जिन्दगी जुनसुकै बेला सकिन सक्छ भन्ने त्रास संँगालेर काममा होमिन बाध्य युवाको मानसिकता कस्तो होला ? त्यो अवस्थाले जीवनप्रतिको उत्साह, लालसा र जोश—जाँगरलाई कति उँचो बनाउला ? सुन्ने जोकोहीलाई सोचमग्न स्थितिमा पुर्‍याउँछ । कतिपयको कामको प्रकृति ठिकठाक नै भए पनि पारिवारिक वियोगले ठूलो समस्या खडा गरिरहेको प्रस्टै थाहा पाउन सकिन्छ ।
लोकमान बर्खास्तीले ब्युँतिएका प्रश्नहरु ›